ဒီလူဘာကြောင့်ထွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဒီလူဘာကြောင့်ထွက်
Posted by pooch on Nov 17, 2012 in News, Opinions & Discussion, U.S. News | 54 comments
ခုရက်ပိုင်း ဟစ်ဖြစ်နေတဲ့ ဟိုနားတစ ဒီနားတစ ဖတ်မိလိုက်တဲ့ သတင်းတပုဒ်ပါ။
၁၄ ရက် နေ့က ထုတ်တဲ့ Weekly Eleven ရယ် ၁၆ ရက်နေ့မှာ ထုတ်တဲ့ Bi Weekly Eleven စာစောင်ထဲမှာ ပါပါတယ်။
စီအိုင်အေရဲ့ ညွှန်မှူး အသက် ၆၀ ရှိတဲ့ ဒေးဗစ် ပီးထရော့စ်က ( ကလေးနှစ်ယောက်ဖခင် အိမ်ထောင်သည်) သူဟာ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လို့ ၀န်ခံပြီး ရာထူးက နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ သတင်းပါ။
သာမာန်ဆိုရင်တော့ သူတို့ လို ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေ တိုင်းပြည်တွေမှာ ( လူ့အခွင့်ရေးလို့ တဆာဆာ အော်တတ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေ ) အထူးသဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ ဘာမှ မစပ်ဆိုင်သလို ဂရုစိုက်စရာ မလိုသလို အပြင်ကနေပြီး ပြောကြဆိုကြ ဝေဖန် ကြတာတွေကို မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ဖူးလို့ပါ။
ပြောလေ့ရှိတာကတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ ပါစင်နယ် ပါ။
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ ပီးထရော့စ် ၀န်ခံပြီးပြောခဲ့တဲ့ စကားတခွန်းကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
” အိမ်ထောင်သက် ၃၇ နှစ် အကြာတွင် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် သူ့တွင် ထိန်းသိမ်းချင့်ချိန်နိုင်စွမ်း အလွန်အမင်း လျော့နည်းလာခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းအပြုအမူသည် မိမိကဲ့သို့ အိမ်ထောင်ဦးစီးခင်ပွန်း တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံမျှသာမက အဖွဲ့အစည်း တခု၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့်ပါ လက်သင့်ခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူးလို့ ”
သူရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်ရတဲ့ အကြောင်းကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ရေးထားတဲ့စာမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။
သူက ဒီရာထူးမယူခင် စစ်ဘက်မှာ ၃၇ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အီရန်နဲ့ အာဖဂန်မှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို နှိမ်နင်းရာမှာ အတော်လေး အကူညီပေးခဲ့နိုင်သူလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
သူနဲ့ ထင်ကြေးပေးခံရတဲ့ အမျိုးသမီးက ကလေးနှစ်ယောက်မိခင် အိမ်ထောင်သည် ပါ ။ သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေး အထ္ထုပတ္တိ စာအုပ်ကို ရေးသားဖို့ အင်တာဗျူးခဲ့သူပါတဲ့။
ဒီကိစ္စကို FBI က လိုက်နေပါတယ်တဲ့ ။ နောက်ကွယ်မှာ ခြိမ်းခြောက်မှု အကျပ်ကိုင်မှု ရှိမရှိကို လိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
လိုရင်းကို ဆွဲရရင်တော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို စည်း မစောင့်စည်းခဲ့လို့ ဒီလို အဖြစ်မျိုး ကို ကြုံခဲ့ရတာလို့ ကျမတော့ ပြောချင်ပါတယ်။
နောက်တခုက လူဆိုတာ လူအထင်ကြီးလေးစားခံရတဲ့ နေရာကို ရောက်ရင် လူလေးစားခံလောက်တဲ့ အရည်ချင်းတော့ ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်နေရာ မြင့်လေ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းလေ ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ရမှာပါ။ ဒီယုံကြည်မှုက ကျမမသေတသက် စွဲမြဲနေမဲ့ ယုံကြည်မှုပါ။
ဒေါ်ဒေါ်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလေး ပြန်ကိုးကားရရင် ကိုယ့်ကို ချစ်သူရော မုန်းသူရောရဲ့ ကွယ်ရာမှာရော ရှေ့မှာရော လူတိုင်း လက်သင့်ခံနိုင်တဲ့ အနေအထိုင် အပြောဆိုကို ကျင့်ကြံနိုင်တာ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုတဲ့စကားလေးပါ။
ဒီကိစ္စက သာမာန် လူတယောက် ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းတယောက် သူဌေးတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ရေး
ဒီလူတွေ ဖောက်ပြန်ရင်တော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်အသိုင်းဝိုင်းတခုပဲ ထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့ နေရာမြင့်သူတယောက် ဖောက်ပြန်ခဲ့ရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲတွေက မသေးလှပါဘူး။
ကျမသိတဲ့ မိသားစု အကြီးကြီးတခုလည်း အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ပြိုကွဲသွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းရင်းကလည်း ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်ပါပဲ ။ လူတယောက်က ဖောက်ပြန်လိုက်တာ ပထမ အိမ်ထောင်ကွဲပါတယ်။ နောက်တော့ သူဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုခဲ့တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးတခုလုံးကို သားချင်းတွေ အားလုံးက အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ခွဲယူကြပါတယ်။
အပြိုင်အဆိုင် ကြားမှာ အစည်းပြေသွားတဲ့ လုပ်ငန်းတခုက ပြိုင်ဖက်တွေကြားမှာ ဘုန်းဘုန်းလဲသွားရှာပါတယ်။ နောက်တော့ ပေးစရာကျန်နေသေးတဲ့ အလုပ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရှင်းစရာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကြတော့ ဘယ်သူတွေက ဘယ်သူ့ဆီ လိုက်တောင်းရမှန်း မသိအောင်ပါပဲ ။ စိတ်ဝမ်းကွဲကုန်တဲ့ အခါ အားလုံးက ကိုယ့်ဖို့ပဲ ကိုယ်ကြည့်ကြတော့ပါတယ်။ အကြွေးတွေလည်း တော်တော်ကျန်သွားတာမို့ ဒီအလုပ်ပြန်စဖို့ ခက်ကြရှာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လုပ်ငန်းပြောင်းသွားတဲ့ အထဲ မိသားစု တစုကတော့ ပြန်မတ်လာနိုင်ပါတယ်။
လူတယောက်ဖောက်ပြန်လိုက်တာနဲ့ အလုပ်သမားတွေရယ် မိသားစု သုံးစုလောက်ရယ် ဘ၀ပျက်သွားတယ် ဆိုတာ က ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ သိပ်ပြီး ဖြစ်နိုင်စရာ မရှိသလိုပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့်မို့ပဲ ကျမတို့ ကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စောင့်စည်းအပ် စောင့်စည်းသင့်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ( Ethics ) ဆိုတဲ့ အရာတွေ ခေတ်အဆက်ဆက်ထဲက ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိနေခဲ့တာပါ။ တခါတရံတော့လည်း ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ လူတွေက ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ရဖို့ အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တယောက်ရဲ့ ပါစင်နယ် ဟာ ထည့်တွက်စရာ မလိုဘူးလို့ ဆင်ခြေအမျိုးမျိုး အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး နဲ့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်အော်တတ်ကြပါတယ်။
မေးချင်တာက သေချာရဲ့လားလို့ပါ ???????
ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေတိုင်းပြည်များတောင် ဖောက်ပြန်မှုကို လက်မခံကြတာ ၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို မခွဲပဲ တွဲမြင်ကြတာ ဂရုစိုက်ကြတာ ဒီဖြစ်ရပ်က သက်သေပါပဲ ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်း်ကလည်း ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် နိုင်ငံရေးကို ခြေချခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး အာနိုး အိမ်ထောင်ကွဲခဲ့သလို နိုင်ငံရေးဘက်မှာ သူ့ပုံရိပ်တွေလည်း သိပ်မကောင်းခဲ့ပါဘူး။
အမေစုတောင် ပြောခဲ့ဖူးပါတယ် ။ Rights ရဲ့ နောက်မှာ Responsibility ရှိတယ်ဆိုတာလေး သတိချပ်ကြဖို့ပါ။ တကယ်တောဲ့ အဲ့ဒီ စကားလေးက အတော်လေး သိမ်မွေ့ပြီး ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။
အမှိုက်ပစ်တာက စပြီး မိသားစု ဘ၀တွေ အထိ၊ တိုင်းပြည်အုပ်ချူပ်မင်းလုပ်ရတဲ့ နေရာအထိ ဒီစကားလေး က တာပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရပိုင်ခွင့် အခွင့်ရေးရဲ့ နောက်မှာ တာဝန်ယူသိတတ်မှုဆိုတာလေး ကပ်ပါလာတယ်ဆိုတာလေး သတိချပ်ကြဖို့ပါ။
နောက်တခုက အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်သူတို့ အတွက် ပြစ်ဒဏ်ကြီးကြီးပေးမဲ့ ဥပဒေတခု ပေါ်လာဖို့ကို လည်း မျှော်လင့်မိတယ်။ ဒီဥပဒေက ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပထမ ဦးစားပေးပြီး စဉ်းစားပေးရမဲ့ အထဲ ပါပါတယ်။ (ကေတီဗွီ မာဆတ်ကလည်း သူ့ခေတ်ရောက်လာပြီလေ ) သွားလို့ ရပါတယ် ။ အိမ်တော့ခေါ်မလာကြနဲ့ပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အပေါ်က ကျမပြောခဲ့သလို မိသားစုတွေ ဘ၀ပျက်ရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည် ဘ၀ပျက်တာနဲ့ အတူတူပဲ မိုလို့ပါ။
ဒီမှာ source ပါ။
စောစောစီးစီး ၀င်မန့်သွားပါတယ် ဒေါ်ပုခ်ျရေ…။
(ကေတီဗွီ မာဆတ်ကလည်း သူ့ခေတ်ရောက်လာပြီလေ ) သွားလို့ ရပါတယ် ။
အချိန်မှန်မှန် အိမ်ပြန်ပါနော် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး နဲ့ သွားတူတယ်…။
ယောက်ျားကောင်းတော့ မောင်းမတစ်ထောင်တဲ့ စာဆိုရှိသားပဲ
တွဲသာတွဲပစ် ကိုကိုရေ… ကိုယ့်ယောက်ျားအကြောင်းကိုယ်သိတယ်
ခဏပျော်တာပဲ ဘ၀အဖေါ်မှလဲ မဟုတ်တာပဲ ကိုကိုရေ…
ကျွန်တော့်မိန်းမ မဒမ်ဘလက်ကို ကျွန်တော် အမြဲတမ်းနောက်တတ်တဲ့ သီချင်းလေးပါဗျာ…။
အဲဒီ စီအိုင်အေ ညွှန်မှူး နှုတ်ထွက်တဲ့ သတင်းကို ကျွန်တော် ဂျာနယ် ၂ စောင် ၃ စောင်လောက်မှာ
စီအိုင်အေဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ နည်းနည်းလှမ်းတော့ သိတ်မပြောနိုင်လှဘူးပေါ့ဗျာ…။
ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ၄၀ ကျော်လာတဲ့ သူငယ်ချင်း တချို့ အိမ်ထောင်ပျက်ကြတာ
ချမ်းသာကြတော့လည်း အလွယ်တကူ အပျော်ရှာနိုင်ကြတာပေါ့ဗျာ…။
ဆိုတော့ မာဆတ်က မိန်းကလေးနဲ့ ညားတဲ့လူလည်းရှိတယ်…။
ကေတီဗီက မိန်းကလေးနဲ့ ညားတဲ့တစ်ယောက်ဆို စာပေနယ်က ပုံနှိတ်တိုက်ပိုင်ရှင်ဗျာ…။
သမီးလေး ၂ ယောက်နဲ့ …။
အခုတော့ သူလည်း ဘ၀ပျက်လို့ နေလေရဲ့…။
ယောက်ျားတွေအတွက်တော့ ၄၀ ပတ်ဝန်းကျင်အရွယ်ဟာ အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်မှု
အများဆုံး အရွယ်တွေပဲလို့ ကျွန်တော်က သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်…။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆို အခုထိ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ Executive Director ဗျာ…။
ဘိလိယက်ခုံက မိန်းကလေးကို အတည်ယူပလိုက်တယ်…။ ဘယ်လောက်မိုက်လိုက်သလဲ…။
သားက ၂ ယောက်…။
မဒမ်ဘလက်နဲ့ သူ့မိန်းမနဲ့ကလည်း အရမ်းရင်းနှီးကြတယ်…။
နောက်မိန်းမထပ်ယူတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ကျွန်တော်က ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး…။
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် စီမံခန့်ခွဲပြီး ကိုယ့်မိသားစု ဘ၀ ပျက်မသွားအောင် စီမံနိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့…။
ကိုဘလက်ရေ ကျမသိတဲ့ သူကတော့ ဂေါက်အိတ်ထမ်းတဲ့ ကယ်ရီလုပ်တဲ့ မိန်းကလေးကို ယူလိုက်တာပါ။
ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဆိုတော့ဘာမှ ပြောချင်စိတ်လည်း မရှိတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ဥပဒေဘက်လှည့်တွေးလိုက်တာပါ။
အရေးအသားရော အကြောင်းအရာပါကောင်းသလို နောက်တက်လာမယ့် comment လေးတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အမရေ။
ဟုတ်ကဲ့ အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လူမူ့ရေးအရရော ကျန်းမာရေးအရပါ အကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးလို့ခံယူပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ဘက်စုံက ကြည့်မယ်ဆိုရင် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်က အကောင်းဆုံးပါပဲ ။
တစ်ပင်လဲလို့ တစ်ပင်ထူတာကတော့ တမျိုးပေါ့။ တခါတလေ စိတ်သဘောမတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲပြီး နောက်အိမ်ထောင်ထူတာကလည်း တမျိုးပေါ့။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ကြောင့် ဘယ်သူမှ မထိခိုက်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ ။
ဟိုလူရီးတွေ ကြပ်ကြပ် သတိထားဘာ
ကွဲကြ ပြဲကြ ဖြစ်အောင် ဖောက်ပြန်တာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့နော်..
ရှုပ်ဇယားတွေ အိမ်ပေါ်ခေါ်မလာနဲ့အဲဒမှာပဲ ထားဂဲ့
ကဲကဲ…ပြောပြော ဘယ်လူရီးတွေလည်း မရှင်းမရှင်းမလုပ်ပါနဲ့ အူးလေး
“အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်သူတို့ အတွက် ပြစ်ဒဏ်ကြီးကြီးပေးမဲ့ ဥပဒေတခု ပေါ်လာဖို့ကို လည်း မျှော်လင့်မိတယ်”
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြုသဘောနဲ့ ဥပဒေသစ်တစ်ရပ် အဆိုပြုလာတာလဲ မင်္ဂလာတစ်ပါး ပါပဲနော
ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီ ဥပဒေများ ပေါ်လာရင် အူးပေလည်း သတိထားပါနော်
မလုပ်ပါနဲ့ ဒေါ်ပုခ်ျရယ် ..ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကာကွယ်မဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်မဲ့ ၀ံကြီးတွေ မရှိဖြစ်ကုန်ပါ့မယ် ..
သူတို့ မရှိတော့လည်း ကျမတို့ ရွာကလူကြီးတွေ ပို့လိုက်မှာပေါ့ ဒါလေးများ
အနောက်နိုင်ငံတွေ တိုးတက်တာ ဒါပဲလေ… လိင်ကိစ္စဘယ်လောက် လွတ်လပ်တယ် သောင်းကျန်းတယ် ပြောပြော.. အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ့ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှု ရှိတယ်။ ပြောရင်တော့ လူနဲ့မူဖက် ရောက်သွားပြန်ပြီ။ ဒင်းတို့လည်း လူပဲ၊ အတ္တနဲ့ လစ်ရင် လစ်သလို လုပ်ချင်တာပေါ့။ ရုပ်ဝတ္ထုခံစားမှု လွန်ကဲတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ သာဆိုးတော့မပေါ့။ သို့ပေမဲ့ စနစ်ကနေ စည်းဝါးမလွတ်အောင် လုပ်ထားတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဆိုတဲ့ စေတနာထက် အချင်းချင်း ခုတ်ကြထစ်ကြ နေရာလုကြ လက်စားချေတဲ့ သဘောပါမယ် သို့ပေမဲ့ စနစ်မှန်တော့ အဲဒီ လူ့သဘောကို အပြုသဘော ပြောင်းယူနိုင်တယ်။ အာဏာရှင် နိုင်ငံတွေမှာတော့ ရုပ်ဝတ္ထု ဆင်းရဲလို့ တိုင်းပြည်ချစ်ရကောင်းမှန်း သိပါမယ် (သူတို့သိတာလည်း အဲဒီပုံစံခွက်ပဲ ရှိတာကိုး) သို့ပေမဲ့ နေရာရတဲ့အခါ စိတ်တိုင်းကျ ဖောက်ပြန်သောင်းကျန်းတာ ထိန်းမရဘူး…။ စနစ်သာ ကောင်းအောင်လုပ်ကြပါဗျာ ကျန်တာတွေ သူ့နည်းသူဟန် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ဦးကြောင် ကျမပြောချင်တာကလည်း ဒါပါပဲ ။
သူတို့ ဘယ်လောက်လွတ်လပ်တယ်ပြောပြော အခြေနေ အချိန်ခါကို လိုက်ပြီးတော့ စောင့်ထိန်းရမဲ့ အရာကို စောင့်ထိန်းရမယ်ဆိုတဲ့ အသိရှိတာကို ပြောချင်တာပါ။
ကျမတို့က မဟုတ်တာကို ရေလိုက်လွဲပြီး အတုယူနေကြလို့ပါ။
အားလုံးက ထောက်ခံတဲ့ဖက်ကပြောဂျဒေါ့ ကျုပ်က ကန့်လန့်ပြောမယ်ဗျာ
ဒီလိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခိုးစားတာကို သက်ဆိုင်တဲ့ရာထူးဒေကနေနှုတ်ထွက်ရတာကတော့
လက်ရှိလို့ ခိုးတာ လက်မရှိရင်ခိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး လက်ခုတ်ဖြတ်ဘလိုက် ဆိုပြီးလုပ်သလို ဖြစ်မသွားဘူးလား
ပြောခြင်တာက အင်္ဂျဝိုင်တစ်လိုင်း ဓာတ်ဆီတစ်လိုင်းဘဲဗျ
မသကာ အဲ့သည်တစ်ယောက်ကို ဖီးလ်းတက်ပီး သတင်းအချက်လက်တွေ အပြင်ထုတ်ရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့
တစ်ခါတစ်ယောက်ပြောဘူးဘာဒယ် အပေါ်က ဘိုးဒေါ်ဘဲလားမသိ
ကိုရီးယားမြောက်တွေ နင်ယူကလီးယားနည်းပညာလို့ခေါ်သလား အဲ့တာတွေရဘို့
သက်ဆိုင်ရာအဘိုးကြီတွေကို ကောင်မလေးတွေနဲ့ ဘာညာကွိကွပြီးနည်းပညာခိုးကြတယ်လို့ဆိုတာဘဲ
ဘပုရေ ကြားဖူးသလောက် အဲ့ဒီလို ရာထူးယူထားသူတွေက ကျော့ကွင်း ဆင်ထားတဲ့ မိန်းမကိစ္စကို ကင်းကို ကင်းမှ ရမှာပါ။ သူတို့ကလည်း အချဉ်မှ မဟုတ်တာ။ ဒီလို ကျော့ကွင်းကိုတောင် လွတ်အောင် မရှောင်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖို့ နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆိုတာ အတော်လေးကို စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါပြီ။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီရာထူးက နှုတ်ထွက်တာပေါ့လေ။ ရိုးရိုးစစ်သားဆိုရင်တော့ ဒီလိုဖောက်ပြန်တာက သိပ်ပြီးပြောပလောက်မယ် မထင်ပါဘူး။ ကွာရှင်းယုံနဲ့ ပြီးပါတယ်။
November 17, 2012 — Updated 0133 GMT (0933 HKT)
(CNN) — Retired Army Gen. David Petraeus resigned from his post as CIA director last week after an FBI investigation revealed he had an extramarital affair.
စီအဲန်အဲန် သတင်းအရ FBI က ( extramarital affair) အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တယ်လို့
( revealed )ဖော်ထုတ် (after) ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ပီးထရော့စ် က ရာထူးက နှုတ်ထွက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
၁။ သူ့ဟာသူ သူ့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ နှုတ်ထွက်တာလား။
၂။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု ပေါ်သွားလို့၊လူသိသွားလို့ (မတတ်သာလို့) နှုတ်ထွက်”ရ”တာလား။
၃။ မိန်းမတယောက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး အဖွဲ့အစည်းရဲ့လှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားဘွယ်ရာ ယူဆရလို့
(အမိန့်အရ) နှုတ်ထွက်ရတာလား ဆိုပြီး ၃ မျိုးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။
ကျနော် အဲဒီ ၃ ချက်ကို ကွဲပြားချင်တာပါ။
အခုဖော်ပြပါ (စီအဲန်အဲန် ရဲ့) သတင်းအရတော့ အချက် ၂ ပုံစံ အရ နှုတ်ထွက်တာပါလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့
နောက်ဆက်တွဲ (ဘီဘီစီရဲ့) သတင်းတွေအရ အချက် ၃ ကလွန်စွာအရေးပါသွားပါတယ်။
အဲဒီလို လူသိသွားပြီဆိုရင်တော့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်ရှိတဲ့ အဲဒီနိုင်ငံမှာ သူ့ကြောင့်
သူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အနေအထားက သွားပုပ်လေလွင့်ဖြစ်မှာမို့ “နှုတ်ထွက်ရတာ”
သိပ်တော့လဲ ထူးထွေသည့်အံ့ရာသော်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
အမှတ်စဉ် ၁ အရ သူ့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့သူနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ လက်ခုပ်တီးမလို့ပါဘဲ။
အချက် ၃ အတွက် ဘီဘီစီရဲ့ သတင်းတွေအရ
လှို့ဝှက်ချက်တွေ ပေါက်ကြားမှုအတွက် အရေးတကြီး စုံစမ်း နေမှုများပါဘဲ။
၁။ သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေး အထ္ထုပတ္တိ ရေးသူ ပေါ်လာဘရော့ဝဲလ်ရဲ့ အိမ်ကို အက်ဖ်ပီအိုင်သွားရောက်ပြီး သူမရဲ့
ကွန်ပြူတာကို သိမ်းယူပါတယ်။ပြီးတော့ စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂။အာဖဂန် နစ္စတန် နိုင်ငံက အမေရိကန် တပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂျွန်အယ်လန်ကို အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး
ဝန်ကြီး ဌာနက စုံစမ်း စစ်ဆေး မှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။
သူဟာ တာဝန်ကနေ နုတ်ထွက်သွား ခဲ့တဲ့ အရင် စီအိုင်အေ အဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြား ရေးမှူး
ဒေးဗစ် ပီးထရော့စ် ကိစ္စ မှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကို မသင့်တော်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေ
လုပ်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲ ထားတဲ့အပေါ်မှာ သူ့ကို စစ်ဆေး နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့အမြင်ကတော့ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်လို့ဆိုတဲ့အချက် (ဒုတိယအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆရင်တောင်)
ထက် အဖွဲ့အစည်းရဲ့လှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှု ဖြစ်နိုင်ချေရှိလို့(ပထမအရေးကြီးအဖြစ်ယူဆလို့)
တနည်းအားဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုရဲ့နောက်မှာ လှို့ဝှက်ချက်ကိုပေါက်ကြားစေဘွယ်ရာဖြစ်နိုင်တယ်
သူ့ကိုနှုတ်ထွက်စေခဲ့တယ်လို့ (သတင်းတွေအရ) သုံးသပ်မိပါတယ်။
((မထွက်ခိုင်းဘဲနဲ့ စစ်ဆေးလို့မရဘူးလားလို့ စဉ်းစားမိပါသေးတယ်။
စစ်ဆေးမယ်ဆိုမှတော့ အနည်းဆုံးရာထူးတော့ ချထားရမှာပါဘဲ။လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရုပ်သိမ်းထားရမှာပါဘဲ။
ဒီလိုမျိုး နာမည်ပျက်ကြီးနဲ့ ရာထူးလဲချခံထားရတာထက် ထွက်တာကပိုရှင်းတယ်လို့တွေးမိပါတယ်။))
(စုံစမ်းဖော်ထုတ်အပြီးမှာ) နှုတ်ထွက်လိုက်ရတာပါလို့ စီအဲန်အဲန်ကဆိုပါတယ်(ပထမသတင်းများအရပါ)။
” ဒီလူဘာကြောင့်ထွက် ” ….ဆိုတဲ့ မပူးခ်ျရဲ့ မေးခွန်းကို ကြိုးစားဖြေဆိုပါလိုက်တယ်။
FPI အစား FBI ။
အက်ပီအိုင် အစား အက်ဘီအိုင် ဟု ပြင်ဆင်ဖတ်ရှူ့ပေးပါရန်။
ဟုတ်ကဲ့ ကိုသစ်ကတော့ ကိုသစ်ပါပဲ လို့ ။
FBI ကိုလည်း စာလုံးပေါင်း ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြသွားတာကတော့ တကယ့်ကို အနုပညာဆန်ပါတယ်။ လက်ခံပါတယ်။
ကျမစိတ်ထင် အဲ့ဒီလူက ဆန္ဒကို ချွန်းမအုပ်လိုက်မိပဲ သတိတချက်လွတ်သွားလို့ ဒီလို အမှုကြီးသွားပုံ ရပါတယ်။ ဒီနေရာကို ရောက်လာမှတော့ တော်လို့သာ ပေါ့ ။
သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတော့ တသက်လုံးကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ တော်ခဲ့ တော်ခဲ့ ဒါကြီးက အမဲစက်ဖြစ်သွားပြီ။ သမိုင်းမလှတော့ဘူးပေါ့။
အ ပုလေး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အစ်မ အဲ့ဒီသီတင်းကို ဖတ်ပြီး ညီမလောက်ကို ဆက်မတွေးမိတာ အမှန်ပဲ။ (ကိုယ့်လူမျိုး ကိစ္စ မဟုတ်လို့လားတော့မသိ။ )
ညက ညီမ ရေးတာဖတ်ပြီးမှ ဆက်တွေးဖြစ်သွားတာ။
ဒါမျိုးကိစ္စ ဆိုတာကလည်း ကာယကံရှင် စိတ်နဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ပထမ အရေးကြီးဆုံးထင်ပါတယ်ကွယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ထိမ်းနိုင်မှ၊ ဆင်ခြင်နိုင်မှ ပြသနာမစမိမှာကိုး။
ကိုယ်တိုင်မထိမ်းချုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို ဘာသာရေးတို့ ဥပဒေတို့နဲ့ထိမ်းနိုင်ရင်တော့ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကောင်းရဲ့။
စိတ်ရောလူရော မလုပ်သင့်တာ မလုပ်မိအောင် ထိမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ လည်း လူမျိုးတွေ၊ အသက် အရွယ်တွေနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးထင်တယ်နော့။
တစ်ခါတစ်ခါများ ကိုယ့်ထက်ငယ်ပြီး ကိုယ့်ထက် ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ သူမျိုးတွေကို တွေ့ရင်လည်း လေးစားမိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် အမ ဒီလို ကိစ္စတွေက လူမျိုးဘာသာ အသက်အရွယ်မရွေးမှာ အချိန်မရွေး ဖြစ်နိုင် ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေပါ။ ဥပဒေတခု ရှိတော့ တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်ကို ချွန်းအုပ်နိုင်မယ် တွေးမိလို့ပါ။
ဒါကြောင့်မို လူတယောက်ကို အကောင်းအဆိုး သတ်မှတ်ဖို့ဆိုရင် သူ့အလောင်းမြေကျပြီးမှ သတ်မှတ်တာ အကောင်းဆုံးလို့ တရုတ်စကားပုံတွေက ဆိုကြတာပါ။
ဘယ်လိုလူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းရာက ဆိုးသွားနိုင်သလို ဆိုးရာကနေလည်း ကောင်းသွားနိုင်တဲ့ သာဓကတွေ အများကြီး အဆက်ဆက် ရှိခဲ့ကြလို့ပါ။
သူ့လို အထူးအရေးပါတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခု ( CIA ) ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ကတော့ ၊
လူကြိုက် နည်းမယ့် ၊ ထောက်ပြခံရမယ့် အပြစ်တွေ ရှိလို့ မရပါဘူး ။
သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ စံနစ်ကလည်း လူကြိုက်များမှ သမ္မတ ဖြစ်သကိုးကွယ့် ။
သာမာန်လူ တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ၊ သိပ်ပြဿနာ မရှိပါဘူး ။
အသိုင်း အဝိုင်းက ၊ ဖိုးစွံ လို့တောင် ကြိတ်အားကျနေကြမှာ ။
ဟဲ ဟဲ ၊ ဒီ စကားလေးကိုတော့ သဘောကျသား ။
” သွားလို့ ရပါတယ် ။ အိမ်တော့ခေါ်မလာကြနဲ့ပေါ့ ”
ယောက်ျားတွေ အားလုံးကလည်း အစပိုင်းမှာ အိမ်ခေါ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူး ။
တဖြေးဖြေး ငြိတွယ်သွားတော့မှသာ ။
ကဲ ကဲ ။ အဘ အဆင်ပြေအောင် ကြားချပေးမယ် ။
ဟဲ့အကောင် ၊ နင် အိမ်ပေါ်တော့ ခေါ်မလာနှင့် ။
နင် သိပ်ရှုပ်ချင်ရင် ၊ နောက်တစ်အိမ် နှင့်ထား ။ မှတ်ထား ။
ကဲ ။ ကျေနပ်သွားကြပြီ မှတ်လား ။ ဟီ ဟိ ။
အဘ လည်း အိမ်တစ်လုံး ထပ်ဆောက်ရင် ကောင်းမလားလို့ ။ ဟီ ဟိ ။
ဟုတ်ပါတယ် အဘဖော သူက လူလေးစားခံရမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နေရာ ရောက်နေလို့ပါ။ ပြောချင်တာကလည်း အဲ့ဒါလေးပါ။ လူလေးစားခံဖို့ လူလေးစားထိုက်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားရှိနေဖို့ လိုအပ်လို့ပါ။
လေးစားခံပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့ ပြည်သူကို ကိုယ်စားမပြုတဲ့ ရိုးရိုး သာမာန်လူတွေဆို ဘယ်လိုပဲ ဖောက်ဖောက် ကိုယ့်ဇာတ်ကို နိုင်လို့ကတော့ ထူးပြီး အရေးလုပ်ပြောမနေပါဘူး။
ဒါတောင် မိသားစုထဲမှာ ဦးစီးဦးဆောင် ပြုနေတဲ့သူဆို မိသားစုအသိုင်းဝိုင်းရဲ့ ကဲ့ရဲ့မှု ရှုတ်ချမှုကနေ မလွတ်ပါဘူး။
သူဌေးတယောက်မို့ ပါဝါ အာဏာရှိလို့ ရှေ့တင်မပြောရဲတောင် ကွယ်ရာတော့ ပျက်ရယ်ပြုနေမှာ အမှန်ပါပဲ ။ နွားသိုးကြိုးပြတ်တို့ နွားအို မြက်နု ကြိုက်တို့ကလောက်တော့ ထမင်းစားရေသောက် ကိုယ့်ကွယ်ရာတိုင်း လက်တို့နေမှာပါ။
ဒါနဲ့ အဘဖောက နောက်ထပ် အိမ်တလုံးလောက်နဲ့တင် လောက်လို့လား
ကိုယ့်ဇာတ်ကိုယ် နိုင်အောင်ကနိုင်လို့ကတော့ ဆယ်လုံးဆောက်လည်း ပြသာနာမရှိပါဘူး။
ယောက်ကျား ၊ မိန်းမ အားလုံအတွက် အိမ်ထောင်ရေမဖေါက်ပြန်စေချင်ရင်
ကာမေသု မိစ္ဆာ စာရ ကံကို သေသေချာချာစောင့် စည်းဖို့  ပါပဲ။
စိတ်ကိုတော့ မနိုင်ဘူး ဆိုတာထားတော့…. ကာယကံ ၊ ဝစီကံ တော့ 
လုံအောင်ထိန်းသင့် တာပေါ့ လေ ။အိမ်ထောင်ရှိ ယောက်ကျားတွေနဲ့ 
ကျူးလွန်မိတဲ့ မိန်ကလေးတွေမှာလည်း ဒီကံ မြောက်တယ်ဆိုတာ
တချို့  အမျိုးသမီးတွေက မသိကြဘူးလေ ……
ယောက်ကျားတွေပဲ အပြစ်ဖြစ်တယ်ယူဆထားကြတာ ဆိုတော့…..
ဟုတ်ပါတယ် ကိုဆာမိ လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဥပဒေ ရှိရင် တော်ရုံ အဲ့ဒီလို ယောက်ျား မိန်းမတွေ အတွက် အဟန့်များ ဖြစ်သွားမလားလို့ပါ။ ကွာရှင်းတာတွေ များလာတော့လည်း မှားသူခံစတမ်းပေါ့ ။
ဒီလူဘာကြောင့်ထွက် ကတော့ ကိုသစ် ရဲ့ ဆက်စပ်ပေးမှုများကြောင့် စဉ်းစားမိသွားပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု အကြောင်းတော့ ထင်ရာဝင်ရွှီး ကြည့်ဦးမယ်။
တစ်ချို့ သူတွေက မိန်းကလေးတွေ နဲ့ တရုံးရုံး နေရတာကြိုက်ပြီး အီစီကလီ တွေ ကြားမှာ ရုပ်မပျက်အောင် သတိထား ရှောင်တိမ်းတတ်ကြတယ်။
မဟုတ်လို့က တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ကောက်ယူနေရမယ်။
လည်လွန်းတဲ့ဘီး ချီးသင့် တာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။
တစ်ချို့ ကတော့ တကဲ့ လူရိုး လူအေးကြီး ဖြစ်ပြီး တစ်ချက် အီလိုက်တာနဲ့ သတိလွတ် ပျော်ဝင်သွားတတ်ကြတယ်။
ဒီလူကြီးက ဘယ်လိုမျိုးလဲတော့ မသိ။
မြန်မာပြည် မှာ က ပိုက်ဆံအတော်ရှိပြီး မယားပြိုင် ထားထား၊ အငယ်ထားထား အေးအေးဆေးဆေးဘဲ တွေ အများကြီး။
ပိုက်ဆံ က တင့်တယ်ပေးထားတာ။
မယားပြိုင်ထားခွင့် ဥပဒေ ရှိတယ် ထင်တာဘဲ။
အရီးရေ ညီမနှစ်ယောက်ကိုပြိုင်ယူတာတောင်တွေ့ဖူးပါတယ် များသောအားဖြင့်ကတော့ ယောက်ျား ကို မှီခိုအားထားနေရတတ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေ ဒီလိုကိစ္စမျိုးသီးခံတတ်ကြပါတယ် မြင်မိသလောက်ပေါ့ အဓိကကတော့ငွေကြောင့်ပါ
နောက်တခုက မယားပြိုင်ဥပဒေက ကိုလိုနီခေတ်တုန်းက ချစ်တီးမယား ဖြစ်ရရှာတဲ့ ကြွေးသိမ်းခံ မြန်မာအမျိုးသမီတွေအတွက် အကာကွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ထားပေးခဲ့တာ ဆိုပါတ
ယ် ဖောက်ပြန်ဖို့အကာကွယ်ပေးခဲ့တာတော့ ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး ပြန်ပြီးပြင်ဆင်သင့်တဲ့ထဲမှာ ဒီလိုဥပဒေတွေလည်း ပါတယ်
” အရီးရေ ညီမနှစ်ယောက်ကိုပြိုင်ယူတာတောင်တွေ့ဖူးပါတယ် ”
ဟင့် ၊ နဲတောင် နဲသေး ။
အမေ ကော သမီး ပါ နှစ်ယောက်လုံးယူထားပြီး ၊
တစ်အိမ်ထဲ ထားတာတောင် တွေ့ဖူးသေး ။
သမီးကို ဦးစားပေးတာများသွားရင် အမေက မီးဖိုချောင်မှာ ဂလုံဂလွမ် လုပ် ။
အမေကို ဦးစားပေးတာများသွားရင် သမီးက ဧည့်ခန်းမှာ ခြေဆောင့် နှင့် ဆိုပဲ ။
HIV တိုက်ဖျက်ကျဆင်းရေး ကျန်းမာရေးကြော်ငြာတွေမှာတော့ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးနေနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါတယ်။ မနေနိုင်ကောမေးတော့ အဖော်ဆောင်ပါ လို့ဖြေတယ်လေ။
ဟုတ်ပါ့ကိုခင်ခရယ် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်လည်း တလင်တမယား စနစ်က အသင့်တော်ဆုံးပါ။
မေ့နေတာလေး ထပ်အားဖြည့်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
ယောက်ျားကပဲ သြဇာလွှမ်းမိုးပြီး မိန်းမက အနိုင်ခံရတဲ့ ခေတ်မျိုး၏
ယောက်ျားလုပ်စာကို မိန်းမက မဖြစ်မနေ မီခိုရတဲ့ခေတ်မျိုး
ယောက်ျားကို မဖြစ်မနေအားကိုးရတဲ့ ခေတ်မျိုးနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်၊
လူကို လူတဦးချင်းကို လူလိုသတ်မှတ်တဲ့ မျက်မှောက်ခေတ်မျိုးနဲ့မသင့်တော်ပါဘူး…။
ဥပဒေနဲ့တားဆီးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာသာရေးတွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ ယဉ်ကျေးမှု့တွေနဲ့ငြိမှာမို့
လူတိုင်းထမင်းစားခွင့်ရှိသလိုမျိုး လူတိုင်းရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျုပ်ကတော့ ကျောက်ခေတ်ကတည်းက စ တယ်ထင်တာပဲ…။
အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ဘာကို ဘယ်အတိုင်းအတာကို ခေါ်တယ်ဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် ခံယူပုံချင်းမတူပါဘူး…
ကိုယ့်ဇနီး/ခင်ပွန်းမှအပ အခြားသူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ၊ သို့မဟုတ် သာယာကြည်နူးမှု့ကိုရှာမှီးတာ (ကာမေသူမိစ္ဆာစာရ) လို့ ယူဆပါတယ်။
အဲတော့ ဘာဖြစ်လဲ… ဖေါက်ပြန်ချင်တဲ့သူက ဖေါက်ပြန်ပေါ့…
ဘာမှမဖြစ်ဘူး… ဥပဒေကိုလဲ ချိုးဖေါက်ရာမကျဘူး
ပြီးတော့ … ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ ကြရုံပါပဲ….
ဦးပါဟာ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ ကျမပုံထဲက မြင်ရုံနဲ့ သိကြောင်းပါ။ ဘယ်လိုအရေတွေပဲ ခြုံခြုံ စိတ်ကလာတဲ့ ရုပ်ကိုတော့ ဖွက်လို့ မရတတ်ပါဘူး။ ဆိုတော့ လေးစားခံထိုက်တဲ့ အရည်ချင်းရှိသူ လူကြီးမှန်းသိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ငှက်ထကြီးဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတာပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ် ဦးပါ ကိုယ်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲ ခံကြရုံပါ။ သူများတွေပါ ခံရရင်တော့ အပြစ်တွေသိပ်ကြီးသွားပါပြီ။
အခု သူကြီးတီထွင်ထားတဲ့ အနှုတ်ပေးတဲ့အရောင်က ပျော့ပြဲပြဲနဲ့ မလှဘူး…
ဒါထက်နဲနဲပိုလှတဲ့အရောင်လေး ပြောင်းပေးပါလား လို့….
နွေဦးကာလ တပိုင်းစို တပိုင်းခြောက် သစ်ရွက်ခြောက်တွေတပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ
မသကာ အပြာစင်း အကျားအကျားလေးဆို ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ
ဟုတ်ပါ့ ၊ အရောင်တွေက ဖျော့ဖြဲဖြဲ နှင့် သိပ်မလှဘူး ။
တခြား ရွေးစရာ မရှိရင် ၊ အနီ ပဲ ပြန်လုပ်ပေး ။
အဲသဟာ ပေါ့ လူအလိုနတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတာ.
ခက်တာက ဘာအရောင်လို့ပြောရမယ်ဆိုတာ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် စိမ်းခြောက်ခြောက်ကြီး မလှဘူး ။ နီနီရဲရဲ ပန်းခင်းကြီးကမှ ထင်းခနဲလင်းခနဲ
စိတ်တိုင်းကျ အနှုတ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင် အားမနာကြပါနဲ့
အမ တော့ အဲ ဒီ သတင်း ဖတ်ပြီး အဲလောက် အတွေး ဆက်မဖြန့် မိခဲ့ဘူး။
”အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်သူတို့ အတွက် ပြစ်ဒဏ်ကြီးကြီးပေးမဲ့ ဥပဒေတခု ပေါ်လာဖို့ကို လည်း မျှော်လင့်မိတယ်။”
ဘယ် မိန်း မ က မှ ကိုယ့် ခင် ပွန်း ရဲ့ ဖေါက် ပြန် မှု ကြောင့် အိမ်ထောင် တခု လုံး ပြို ကွဲ ရမယ့် အဖြစ် ကို ရောက်ချင် ကြ မှာ မဟုတ် တော့ အဲဒီ အဆို ကို အပြည့် အ၀ ထောက်ခံ ပါ တယ်။
ဒါ ပေမယ့် ဥ ပဒေမှာ မယား ပြိုင် ဆိုတဲ့ စကား လုံး ရှိနေ သမျှ အဲလို ဥ ပဒေ မျိုး ပေါ် လာ ဖို့ မျှော်လင့် လို့ မရသေး ဘူး။ ဒီတော့ ယောက်ျားတွေ မဖောက်ပြန် နိုင်အောင်၊ အိမ်ထောင် မပြို ကွဲ အာင် မိန်း မတွေ ဘက်က ၊ ချည် နှောင် တတ် ရမယ်၊ ပါး နပ် လိမ္မာ ရ မယ်။
CIA က လူကြီး အကြောင်း ပြန် ဆက် ရ ရင် ဦး သစ် မင်း ထောက်ပြ ခဲ့ သလိုပါ ပဲ သူနဲ့ ဖောက်ပြန် တဲ့ မိန်းမ ဟာ သာ မန် အရပ် သူ၊ ဒီထက် ပိုပြောရ ရင် ကချေသည် တစ်ယောက် ဖြစ်နေ ရင် တောင် ဒီလာက် မကြီးကျယ် သွား နိုင်ဘူး။ ခုဟာက သူ့ ကိုယ် ရေး အထုပ္ပတိ ရေးတဲ့ စာရေးဆရာမ တစ်ယောက် ဖြစ်နေ လို့ ၊ တနည်း ပြော ရရင် ကလောင်ကိုင် ထားသူ ဖြစ် လို့ ပါဆန် နယ် နဲ့ ပရော် ဖက်ရှင်နယ် ကို ခွဲ ခြား ပစ်လိုက် တယ် လို့ မြင် ပါကြောင်း ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ အမမိုချို ကျမတို့ အမျိုးသမီးထုတွေ စုပြီး အဲ့ဒီ ဥပဒေပေါ်လာဖို့ လွှတ်တော်ကို တင်ကြရရင် မကောင်းဘူးလား
စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာပါ အမရယ် မြင်ရတွေ့ရတာတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလို့ပါ။
”အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်သူတို့ အတွက် ပြစ်ဒဏ်ကြီးကြီးပေးမဲ့ ဥပဒေတခု
ပေါ်လာဖို့ကို လည်း မျှော်လင့်မိတယ်။”
ရှာရီးယား ဥပဒေမှာတော့ ရှိပြီးသားပဲ ။
ခဲ နှင့် ပေါက်သတ်တယ် ဆိုလား ။
The Scarlet Letter လားမသိဘူး။ ကြည့်ဘူးတယ်။ ဖောက်ပြန်သူက ရင်ဘတ်မှာ Adultery က A ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးရေးပြီး လူရှေ့ ရပ်ရတာ။
အနုပညာကြောင့် အဲဒီတုန်းက အပြစ်မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သနားနေသေးတာ….
တကယ်တော့ အဲဒီကိစ္စဆိုတာ မရှိရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။
တားတို့ ကတော့ ငယ်သေးတော့ သိပါဝူးကွယ်…
စကားလက် ဆို စကားလက် ဂျိုဟန်ဆန်ပဲ တိတယ်…
အားပါးတရကို အားပေးတာ …တီဗီတောင် စကားလက် နာမည်နဲ့ ထုတ်တာပဲဝယ်တာ….
တားနဲ့ အန်တီနဲ့ အသက်အရမ်းကွာတယ်လေ တားရယ်။
စကားလက်ကိုတော့ နာ့ အချစ် လုတွားတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ တူနွန်းနွမ့် ကျိကိုကျိဘူး။
(အကောင်းပြောနေ မိဂီ ဖောက်လာပြီ) :harr:
အားရီးကြိုက်တယ် …ဒင်းကလေးကိုတော့ …
ခုနောက်ပိုင်း Liu Yei Fei လေးကို မေတ္တာပိုမိ သယောင်ရှိတော့သကွယ်….
(သင်ချာလေးလည်း သီလရှင် ၀တ်သွားပြီကိုး..)
သူ့ကိုဖြင့် Forbidden Kingdomလားတစ်ကားပဲကြည့်ဖူးတယ်ကွယ်။ သူ ထင်ပါရဲ့။
ဒါကို ဂျက်နှစ်ဂျက်ကြား ဗျာများနေရတာနဲ့ ကောင်းကောင်းအာရုံမရောက်နိုင်ဘူး။
ဂလောက် ချိစာကောင်းတဲ့ ချာတိတ်မကိုများဗျာ ….
ကျော်တောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အန်တီလေး Zhou Xun
နည်းနည်းအသက်ရလာတော့ Fan Bing Bing ကနေ နောက်ဆုံး
၄-၅နှစ်အတွင်း ငယ်ခြစ်တွေ အကုန်မေ့ပီး ဒီသူငယ်မ မှ ဒီသူငယ်မ
ညက်နှာ များတာတော့ မှုတ်ပါဝူးအေ …
ayumi hamasaki လေးကိုလည်း အားရီးချိတာရယ်..
တရုတ်မင်းသမီးတွေတော့ ဟိုနားကြည့်၊ ဒီနားပြောနဲ့ သိပ်မစိမ်းလှပါဘူး။
ဂျပန်က မင်းသား/သမီးတွေတော့ ဝေးသကွယ်။
ဂျပန် စီးရီးဆိုလို့ ခုတလော Absolute boyfriend လားကြည့်ဖူးပါရဲ့။ စက်ရုပ်မင်းသားလေးကြိုက်သတော့။
ဂီဂီ အပြောနောက်လိုက်ရတာ သူများ ပို့(စ) မှာ မဆိုင်တာတွေပါကုန်ပြီရယ်။
အဲ့ဒီလို မဆိုင်တာတွေ လာပြောတဲ့ အတွက် ဖိုင်းကောက်ပါတယ် မဆွိပြန်လာရင် မုန့်လိုက်ကျွေးပါ ဒါဗျဲ
အေးဗျာ ..ကျုပ်လည်း ထွက်တော့မယ် ချက်လို့ …
ကျိကျိနဲ့ ကြိုက်ခဲ့စဉ် ကာလပတ်လုံး
သင်ချာကြီးကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားပါးတရ
မဟားဒယား ပစ်မှားခဲ့မိတာကို တွေးမိတိုင်း
ညည်းကတော့ ထွက်ရုံနဲ့တင် မလုံလောက်ပါဘူး ဘ၀ပါပြောင်းသင့်တာပါ
ဒါမှသာလျှင် အမျိုးသမီးထုကြီးတရပ်လုံးအတွက် အန္တရယ်ကင်းမှာ
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ … ဒါပေမယ့်လေ .. ဖတ်ပြီး ဆွံ့ အသွားတယ် … ။ ကိုယ်တိုင်လည်းဖောက်ပြန်ဖို့ ကြိုးစားနေမိလို့ပါပဲ .. (စိတ်)ပြောပါတယ် ဟီး
နှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာကတော့ သူ့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပေါ့နော် ။ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှု ရှိလို့ အလုပ်မှ ရပ်စဲတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလျှင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာသာ ၊ ရာထူးပေါ်မူတည်ပြီး အက်ရှင်ယူကြတာမျိုးလေ ။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှကျတော့ .. တာဝန်ထမ်းနေတဲ့ယောကျာ်းအပြင် သူ့မိန်းမပါ … အလုပ်လုပ်ကြရတာကိုး … ဟီးဟီး .. ဒါပေမယ့်.. ဘာညာဘာညာ လူမသိသူမသိ ဇာတ်လမ်းလေးတွေတော့ … ရှိတတ်ကြပါတယ် ။
ညီမတို့ အိမ်ဘေးက ဘိုးတော်ကြီးတစ်ယောက်ဆို …. ဦးစီးမှုးအဖြစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတယ် ။ သမီးလေးနဲ့ မိန်းမနဲ့ ရှိနေလျှက်နဲ့ …. ပိုက်ဆံ ရှာနိုင်တော့ ဘီယာဆိုင်က မိန်းမက အတင်းကပ်ပြီး တိတ်တိတ်ပုန်းယူလိုက်ကြပါတယ် ။ မယားကြီးက သိတော့ .. ပြသနာမရှာပါဘူး ၊ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ကွာရှင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဆွေကြီးမျိုးကြီး အသိုင်းဝိုင်းက မယားကြီးဖြစ်သူမို့ … ကာယကံရှင်က အေးချမ်းနေတာတောင် ၊ အမျိုးတွေက မကျေနပ်ပဲ ၊ ဖိအားပေးတိုင်တာတောတာတွေ လုပ်လို့ ၊ နယ်ဘက်ကို အပို့ခံခဲ့ရပါတယ် ။ ရာထူးချင်းတူပေမယ့် …. နယ်ဆိုတော့ … ဘာဂွင်ညာဂွင်မရှိဘူးထင်ပါရဲ့ …. ၊ ဟိုလူလည်း သိပ်မကြာဘူး စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်ပြီး မွဲလာတယ် မယားငယ်ကလည်း ၊ အဲ့ဒဏ်မခံနိုင်လို့ လစ်သွားတယ် ။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဒါပါပဲ ချင့် … ။
နောက်ဆုံးတော့လည်း ကိုယ်လုပ်တဲ့အတိုင်း ကိုယ်ပြန်ရတာပါပဲ တုန်တုန်ရယ်။ လူတွေက သတိမထားမိလို့ပါ။
စိတ်ကတော့ အမလည်း ဒီရက်ပိုင်း ဖောက်ချင်ချင်ဖြစ်နေပါတယ် ညီမရယ်
ပရော်ဖက်ချင်နယ်နဲ့ပါဆင်နယ်ရောသွားတာများလား။ စိတ်မကောင်းစရာ (နှမြောစရာ)။
အချစ်ကို ဦးစားပေးလိုက်တာများလား (အာ…ဒီအရွယ်ကျီးကျမှ…ဟုတ်သေးပါဝူး) ကိုသစ်ပျောသလို ဒေတာပေါက်ကျားမှာစိုးလို့ နှုတ်ထွက်ရတယ်ဆိုရင် ကိုယူထားတဲ့တာဝန်မှ အားမနာ
ဒါနဲ့ အိုက်ဒီ ဖောက်ပြန်တဲ့ နှစ်ယောက် ဒဂယ်ရသွားမှာလား သိချင်သားဗျာ။ :hee:
လောလောဆယ်တော့ ယူလို့မရလောက်သေးဘူး နှစ်ဖက်လုံး အိမ်ထောင်လက်ရှိတွေ မကွာကြသေးဘူး။
နောက်ပြီး စောင့်ကြည့် အစစ်ဆေးခံနေရတာဆိုတော့လေ။ မျက်ကန်းအချစ်တွေပေါ့လေ
အန်တီပူးခ်ျအိမ်နောက်က ငှက်ပျော တပင်စီ လက်တလော ဖြေရှင်းဖို့ ပေးထားတယ်ကြားတာပဲဗျာ